Iyo Bahamas Ministry ye Tourism & Aviation Inofungisisa Pamusoro Pegore Rakaoma uye Mazuva Akajeka
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Bahamas Kuputsa Nhau » Iyo Bahamas Ministry ye Tourism & Aviation Inofungisisa Pamusoro Pegore Rakaoma uye Mazuva Akajeka
Awards • Bahamas Kuputsa Nhau • nhau • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
bahamas Ministry yekushanyirwa
Sezvo 2020 inosvika kumagumo, iyo Bahamas Ministry of Tourism & Aviation iri zvakare kufunga pamusoro peinoshamisa nhoroondo uye rakaoma gore. Mushure mekupemberera runyorwa-rwekuputsa vashanyi vanosvika mamirioni manomwe mu2019, nyika yaive yakagadzirira kukura nekuenderera mberi kwekufambisa, nekuda kwekuwedzera kwakarongwa kwendege kubva kumakambani makuru akati wandei, tisingataure nezve kubvumidzwa kwenhepfenyuro dzekunze, senge The New York Times, Frommer's uye The Globe uye Mail, pakati pevamwe, iyo yakapa iyo Bahamas senzvimbo yekufanirwa-yekushanyira muna 2020.
Denda re COVID-19 raive dambudziko risingafanoonekwi iro rakakanganisa zvisati zvamboitika muindasitiri yekushanya yepasirese, mhedzisiro yacho yakanzwikwa zvakanyanya muBahamas. Tourism ndiyo moyo wenyika uye, nekudaro, ibhizinesi remunhu wese. Sezvinoonekwa mushure meEngururu Dorian, maBahamians havazi vazivikanwi mukugadzira nhoroondo pasi pemamiriro akaoma. Zvino, vanhu veBahamian vauya pamwechete semhuri yezvitsuwa, vakabatana musimba nekusimba kubatsira kudzora kupararira kwe COVID-19 uye kuona kuti bhizimusi rinogona kukurumidza kubudirira zvakare. Kune tariro huru mukuti zviwi zvichaona kudzoka kune zvinyorwa zvinoputsa nhamba dzevashanyi, kana zvangove zvakanaka kuti vese vafambe vakasununguka zvakare. Panguva ino, hurumende iri kuita zvese zvinogoneka kuti vadzosere vaBahamian kubasa.
"Zviri nerutsigiro rusingachinji pamwe nekudyidzana kweve Bahamas vane chekuita nekushanya, mabhodhi ekusimudzira, vamiririri, vezvenhau nevamwe vanobvakacha pakufamba uko nyika yakwanisa kumisikidza mirawu yepachitsuwa nematanho ekudzivirira kubatsira kubvisa kumwe kupararira kwe COVID- 19, "akadaro Gurukota reBahamas rezveKushanya & Aviation, Dionisio D'Aguilar. "Mitemo yedu mitsva, yakagadziriswa yekupinda nekufamba pakati pezvitsuwa, yakagadziriswa mushure mekuwongorora, kunyatsoongorora uye kupindura nekukurumidza kubva kumasangano ese ehurumende, zvine mutsindo kumanikidza hutano hweveruzhinji nekuchengetedza matanho vachibvumira vafambi kunakidzwa zvakasununguka nezvedu chiitiko chezororo."
Maprotocol achangoburwa akagamuchirwa zvakanaka nevatengi nevashanyi vekushanya zvakafanana uye zvinowirirana nenhau dzekuvhurwa kwepfuma yepahotera uye kuwedzera kutangazve kwendege. Ehe, matatu emahotera mahombe muNassau - Grand Hyatt Baha Mar, Atlantis Paradise Island neBritish Colonial Hilton - ari kuvhurazve pakati paDecember, aine mamwe mahotera ehotera achidzoka muna Ndira naKukadzi. Zvakare kutanga pakati paZvita, vatakuri vepamusoro veUS ndege vanosanganisira JetBlue, American Airlines, United Airlines neDelta vari kuwedzera ndege kune avo marongero.
"Ndiro basa redu kuThe Bahamas Ministry of Tourism & Aviation kusimudzira kushanya ku nyika yedu yakanaka, uye nepo 2020 yaunza nzira dzisingaenzaniswi pabasa iri, tarisiro yedu nekuzvipira kubasa iri hazvina kuzununguka," akadaro Joy Jibrilu, Director General we Bahamas Ministry of Tourism & Kubhururuka. "Sezvatinotarisira kusvika ku2021, ticharamba tichiwana nzira nyowani dzakasiyana dzekusimudzira zviwi zvedu kuburikidza nezvirongwa zvakawandisa uye zvirongwa zvinodzosa vashanyi vazhinji kumahombekombe edu nekukurumidza sezvinobvira."
Bahamas Ministry of Tourism & Aviation inoenderera mberi nehukama hwehukama neruzhinji kushambadzira kusvika misika yakakosha muUS nekusimudzira kuti Bahamas yakavhurika bhizinesi, uku ichipana zvinodiwa zvekupinda nemitemo yekufamba inodiwa kuti nyika igare yakachengeteka. Mazano ekusimudzira anosanganisira:
• Targeted Media Plan - Kubva kutanga kwaKurume, chirongwa chezvenhau chakanangana nechinangwa chegeo chave kuenderera mberi nechinangwa chekuchengeta maBahamas mukutarisisa kwakagadzirirwa vafambi, kunyanya avo vanogara mumisika yakakosha seSouth Florida, Houston neNew. York, uye kukwezva avo vaigara vachienda kwaimboenda munguva yakapfuura kuti vadzoke.
• Robust Media Outreach - Kutaurirana kwakabatana uye kwakapararira kune zvekushanya, mararamiro uye nhau midhiya zvakazivisa vatengi kuti Bahamas yakavhurwa vashanyi, uku vachipanana ruzivo rwakakwana pamusoro pezvinodiwa zvekupinda uye zvitsuwa zvepachitsuwa zvinokanganisa vashanyi. Zvinyorwa zvinofukidza misika yakakosha yakamira seyakazvimirira kubhururuka uye chikepe zvakanangwa zvakare kuona kuti vateereri vavo vanoziviswa nezvezvazvino zvinodiwa zvekushanyira maBahamas.
Dzazvino Mibayiro - VaBahamas vakatsvaira mubairo wedunhu gore rino, vachihwina mukurumbira wakakwira. Caribbean Travel Awards dzakatumidzwa kunzi The Bahamas Innovative Kuenda kweGore; mahotera mana eBahamian anosanganisira Kamalame Cay, Rosewood Baha Mar, Grand Hyatt Baha Mar uye SLS Baha Mar akagamuchirwa neCondé Nast Traveler's Readers 'Choice Awards, uye Zvitsuwa zveBahamas zvakazivikanwa gore rino. Scuba Diving Magazini eVaverengi Sarudzo Mubairo, iine kuiswa kunoratidzira kwakakura kwenzvimbo dzekudyira kupihwa zviwi mazana manomwe zvitsuwa uye macays. Mibairo iyi yaisanganisira iyo Bahamas inokunda nzvimbo dzepamusoro mumapoka mazhinji asi inonyanya kuzivikanwa # 700 muboka remhuka hombe. Caribbean Zvinyorwa Caribbean Kufamba Makomborero Anoziva Iyo Bahamas muZvikamu Zvitatu - In Caribbean Zvinyorwa 7th gore rega reCaribbean Travel Awards, Iyo Bahamas yakapihwa Kugadzira Kugadzirira kwegore nekuda kwekuenderera kwayo kuchinjika mukati medenda uye nekumisikidza muyero wekupinda maitirwo maitiro. Pamusoro pezvo, Nassau's Lynden Pindling International Airport yakatumidzwa zita Caribbean Airport yeGore uye Graycliff yakazivikanwa seye Caribbean Restaurant yeGore.
Bahamas Yakawedzerwa Gara Chirongwa - Zvitsuwa zveBahamas zvakazivisa chirongwa chayo chitsva cheBahamas Extended Access Travel Stay (BEATS), mvumo yekugara gore rimwe chete yakagadzirirwa kubvumidza vadzidzi nevadzidzi kurongedza laptop yavo uye nesutu dzavo pavanofora vachienda kunorova yavo pachitsuwa dhiramu, kure, kubva kuThe Bahamas.
• Yavandudzwa Webhusaiti - Iyo nyowani, yakagadziridzwa Bahamas.com webhusaiti iri kugadzirira kuvhura, ichipa yakanyanya mushandisi-inoshamwaridzika interface uye inosanganisira mamwe maturusi ekusimudzira akakosha ekuda mapoinzi evanogona vafambi. Zvikamu zvitsva zvinoratidzira kudanana, zviitiko, kunakidzwa uye kutarisisa kwakanyanya pamusoro pekuti ungasvika sei kuEut Islands.
• Kutengesa kweVirtual uye Vertical Market Kupa - Sezvo kutengesa uye kusimudzira musika kusimudzira kwaisakwanisa kuitirwa-munhu gore rino, timu yekutengesa yeVesheni Yezvekushanya yakashanda nekukurumidza kuti iuye nezvipo chaizvo izvo zvaizoita kuti vatengesi venharaunda vafambe. Iri basa raisanganisira kuvandudzwa kweiyo nyowani nyowani chikuva yewebhuinars uye zvekushambadzira show. Chirongwa chehunyanzvi cheBahamas chakavandudzwa zvakare kuvhara musiyano uripo pakati pefundo, kurudziro nekutengesa. Nekombiki iyi nyowani, Bazi rezveKushanya rakaitisa zviitiko zvepasirese kuunza vese vanotengesa uye vatengesi vanobatana pamwechete kuti vagovane nekukurukura COVID-19 protocols uye zvinyorwa. Zvimwe zviitiko zvemuenzaniso zvakasanganisira: yekutanga-yakamboitika Bahamas dhiza pavilion yevatyairi vekunze mukati meDEMA, iyo hombe dhizaini yekutengesa pasi rese; mawebhu webhusaiti evateereri vega vega vachitsvaga kuuya kwekutanga-clearance chirongwa muSouth Florida uye Facebook Live zviitiko zvine nyanzvi dzekugadzirira, mubairo wekuhwina mixologists uye nevamwe vemhizha vemo. Chekupedzisira, timu yakashanda nesimba kusimbisa hukama nevakabatana pamweya mukuyedza kufambisa kudzoka kwendege dzenyika dzakawanda. Bazi iri rakaparura chirongwa chekudonha uye vamiriri vechikepe chinosanganisira vanokurudzira vepamusoro muindasitiri vanozotitsigira nekutibatsira kusimudzira nzvimbo yacho. Pfungwa dzeRomance 2020 dzinosanganisira kutora chikamu chakabudirira kuTervAlliance Kuwa kuratidzwa kwekuenda kuMichato neHoneymoon Chikamu uye kuongorora kwepamutemo kweThe Bahamas 'Romance Magazine iyo ichazadziswa zvizere panguva yeRusununguko Romance Forum munaKurume wa2021.
• Kutaura Kwechokwadi Kwenyaya - Mushandirapamwe wekuhwina mubairo-wakakunda mubairo wakaratidza vaBahamian vemo vachitaura netsika dzenyika, chikafu, hunyanzvi uye zvimwe zvipo zvakasarudzika zvinoita kuti maBahamas abude pachena kubva kune zvimwe zvitsuwa.
• Chirongwa cheBlogger - Pamusoro pechirongwa chechokwadi chekutaura nyaya, Bazi rezveKushanya rakagadzirawo chirongwa chakasimba chekublogi paBahamas.com apo vanokurudzira vanyori nevanyori vakagovana nyaya dzavo dzekufamba netsika muBahamas netarisiro yekukurudzira kudzungaira nekubatana neramangwana. vashanyi.
• Yemukati Zvemukati Pfuti - Mukuyedza kuchengetedza zvitsva zvekugadzira zvichiyerera paKushanyira The Bahamas chiteshi chenharaunda, Ministry yakanyorera matarenda emuno uye vashandi vekamera kuti vapfure zvemukati zvakanangana nekukwezva vashandisi kuti vade kudzidza zvakawanda nezvekuenda.
Iine zvitsuwa zvinopfuura mazana manomwe uye cays, uye 700 yakasarudzika nzvimbo dzezvitsuwa, The Bahamas iri makiromita makumi mashanu chete kubva kumahombekombe eFlorida, ichipa nyore kubhururuka kure kutiza iyo inotakura vafambi kubva kune avo ezuva nezuva. Zvitsuwa zveBahamas zvine hove dzepasi rose, kudhizaivha, kukwasva chikepe uye zviuru zvemamaira epasirose emvura anoyevedza uye mahombekombe akamirira mhuri, vakaroora uye vafambi. Ongorora zvese zviwi zvaunofanira kupa pa www.bahamas.com kana uri Facebook, YouTube or Instagram kuti uone nei Zviri Nani muBahamas.